Olombelona, ​​olombelona - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Olombelona [olombelona]
Nahary ny lehilahy sy ny vehivavy araka ny endrik’Andriamanitra Andriamanitra. Nitahy ny olona Andriamanitra ary nandidy azy hihamaro sy hameno ny tany. Tamin’ny fitiavana no nanomezan’ny Tompo hery ny olona hanapaka ny tany ho mpitandrim-pananana sy hanapaka ny zavaboariny. Ao amin’ny tantaran’ny famoronana, ny olombelona no satroboninahitry ny famoronana; ny olombelona voalohany dia i Adama. Nasehon’i Adama nanota ny olombelona, ​​ka nikomy tamin’ny Mpamorona azy, ka nahatonga ny ota sy ny fahafatesana ho amin’izao tontolo izao. Na manao ahoana na manao ahoana ny maha-mpanota azy, dia mitoetra araka ny endrik’Andriamanitra ny olona ary voamarika amin’izany. Noho izany, ny olona rehetra miaraka sy ny tsirairay dia mendrika ny fitiavana sy ny fanajana ary ny fanajana. Ny endrik’Andriamanitra tonga lafatra mandrakizay dia ny tenan’i Jesosy Kristy Tompo, ilay “Adama farany”. Amin’ny alalan’i Jesosy Kristy no namoronan’Andriamanitra ny olombelona vaovao, izay tsy ananan’ny ota sy ny fahafatesana intsony ny fahefana. Ao amin’i Kristy no ho tanteraka ny fitovian’ny olona amin’Andriamanitra. (1. Mosesy 1,26-28; Salamo 8,4-9; Romana 5,12-21; Kolosiana 1,15; 2. Korintiana 5,17; 3,18; 1. Korintiana 15,21-22; Romana 8,29; 1. Korintiana 15,47- enina ambin'ny folo; 1. Johannes 3,2)
Rehefa mijery ny lanitra isika, rehefa mahita ny volana sy ny kintana, ary amin'ny halehiben'izao rehetra izao sy ny hery lehibe izay misy ao amin'ny kintana tsirairay dia mety hanontany isika hoe maninona no miahy antsika Andriamanitra. Vola kely izahay, voafetra ihany - toy ny antsy mihazakazaka mamerivily mitsingevana ao anaty antontam-bato. Fa maninona isika no tokony mino fa mijery ity ony ity, antsoina hoe tany izy, ary nahoana izy no tokony hanahy ny momba ny vitsika rehetra?
Ny siansa maoderina dia manitatra ny fahatsiarovantsika ny haben'izao rehetra izao sy ny haben'ny kintana tsirairay. Amin'ny teny astronomika, ny olombelona dia tsy manan-danja kokoa noho ny atôma vitsivitsy mihetsika kisendrasendra - fa ny olombelona no manontany ny dikany. Ny olona mampivelatra ny siansa momba ny astronomia no mikaroka izao rehetra izao nefa tsy miala ao an-trano. Ny olona no mamadika izao rehetra izao ho tohatra ho an'ny fanontaniana ara-panahy. Miverina amin’ny Salamo izany 8,4-7:
«Raha hitako ny lanitra, ny rantsananao, ny volana ary ny kintana izay namboarinao: iza ny olona izay heverinao ho azy, ary zanak'iza no alao azy? Nataonao ambany kely noho Andriamanitra izy, nosatrohanao voninahitra sy voninahitra. Efa nataonao ho tompon'ny tànanao izy, ary ny zava-drehetra no nataonao teo ambanin'ny tongony. »
Toy ny biby
Ka inona ary ny olombelona? Nahoana Andriamanitra no miahy azy? Ny olona dia amin'ny endriny sasany, saingy Andriamanitra, fa ambany kosa, nefa satro-boninahitra sy voninahitra avy amin'Andriamanitra irery. Sady diso ny olona, ​​tsiambaratelo - voan'ny ratsy, nefa mino fa tokony hanao zavatra tsara izy ireo. Ka manimba ny fahefana, nefa manan-kery amin'ny zavamananaina hafa. Hatreto dia ambanin'Andriamaniitra, ary mbola nasehon'Andriamanitra tenany mendri-kaja.
Inona ny lehilahy Ny mpahay siansa dia miantso antsika hoe Homo sapiens, mpikambana ao amin'ny fanjakan'ny biby. Antsoin'ny soratra masina hoe nephesh, teny izay ampiasaina amin'ny biby koa. Manana fanahy ao anatintsika isika, toy ny biby manana fanahy ao anatintsika. Vovoka ary rehefa maty isika dia miverina amin'ny vovoka toy ny biby. Ny atidohantsika sy ny toe-batana dia mitovy amin'ny biby iray.
Milaza anefa ny Soratra Masina fa tsy mihoatra ny biby isika. Ny olombelona dia manana lafiny ara-panahy - ary tsy afaka milaza amintsika ny ampahany ara-panahy ny siansa. Tsy filozofia ihany koa; tsy afaka mahita valiny azo itokisana fotsiny isika satria mieritreritra izany. Tsia, ity ampahany amin'ny fisiantsika ity dia tsy maintsy hazavaina amin'ny alàlan'ny fanambarana. Ny Mpamorona antsika dia tsy maintsy milaza amintsika hoe iza isika, inona no tokony hataontsika, ary nahoana izy no miahy antsika. Hita ny valiny ao amin'ny Soratra Masina.
1. Mosesy 1 dia milaza amintsika fa Andriamanitra no nahary ny zava-drehetra: ny mazava sy ny haizina, ny tany sy ny ranomasina, ny masoandro, ny volana ary ny kintana. Nivavaka tamin’ireny zavatra ireny ho andriamanitra ny Jentilisa, nefa tena mahery tokoa ilay Andriamanitra marina ka afaka niantso azy ireo ho nisy tamin’ny fitenenana fotsiny. Eo ambany fifehezany tanteraka ianao. Na namorona azy tao anatin'ny enina andro na enina lavitrisa taona izy dia tsy dia zava-dehibe loatra noho ny nanaovany izany. Niteny izy, teo, ary tsara.
Amin’ny maha-ampahany amin’ny zavaboary rehetra, dia noforonin’Andriamanitra koa ny olombelona sy 1. Milaza amintsika i Mosesy fa tamin’ny andro iray ihany no namoronana antsika tamin’ny biby. Ny tandindona amin’izany dia toa milaza fa mitovy amin’ny biby isika amin’ny lafiny sasany. Afaka mahita ny tenantsika isika.
Tsy mitovy amin’ny zavatra hafa rehetra anefa ny famoronana ny olombelona. Tsy misy hoe "Ary niteny Andriamanitra ... dia nisy izany." Izao kosa no vakintsika: “Ary hoy Andriamanitra: Andeha isika hanao olona, ​​izay sarin-javatra tahaka antsika, izay manapaka ...” (1. Mosesy 1,26). Iza io "isika" io? Tsy manazava izany ny andinin-teny, fa mazava ho azy fa zavaboary manokana natao araka ny endrik’Andriamanitra ny olombelona. Inona io "sary" io? Tsy manazava an'izany indray ny soratra, fa mazava ho azy fa miavaka ny olona.
Ny teôria maro no natolotry ny hoe inona ity "endrik'Andriamanitra" io. Misy ny milaza fa faharanitan-tsaina izany, herin'ny fisainana tsy misaina na fiteny. Ny sasany dia milaza fa io no toetrantsika ara-tsosialy, ny fahafahantsika manana fifandraisana amin'Andriamanitra, ary ny lahy sy ny vavy dia taratry ny fifandraisana ao anaty Andriamanitra. Ny hafa kosa milaza fa fitondran-tena, fahaizana mandray fanapahan-kevitra tsara na ratsy. Misy ny milaza fa ny sary no manjaka eto ambonin’ny tany sy ny zavaboariny, fa mitovy aminy isika, dia solontenan’Andriamanitra. Ny fanjakazakan-tena dia tsy avy amin'Andriamanitra raha tsy ampiharina amin'ny fomba tsara.
Misokatra ny zavatra takatry ny mpamaky amin’io fandrafetana io, nefa toa maneho fa mitovy amin’Andriamanitra mihitsy ny olona. Misy dikany mihoatra ny natoraly ny maha-izy antsika, ary tsy hoe mitovy amin’ny biby isika fa toa an’Andriamanitra. 1. Tsy milaza zavatra betsaka amintsika i Mosesy. Miaina ao amin'ny 1. Mosesy 9,6fa ny olombelona rehetra dia natao araka ny endrik’Andriamanitra, na dia efa nanota aza ny olombelona, ​​ka tsy azo leferina ny famonoana olona.
Ny Testamenta Taloha tsy milaza intsony ny "sarin'andriamanitra", fa ny Testamenta Vaovao dia manome an'io dikan-teny fanampiny io. Ao no ianarantsika fa i Jesosy Kristy, ilay sarin'andriamanitra tonga lafatra, dia manambara antsika Andriamanitra amin'ny alàny feno fitiavan-tena. Tokony hovolavola amin'ny endriny mitovy amin'ny sarin'i Kristy isika, ary amin'ny fanaovana izany dia hahatratra ny fahafaha-manao tanteraka izay nokasain'Andriamanitra ho antsika rehefa namorona antsika araka ny endriny Izy. Arakaraka ny avelantsika hiaina ao amintsika i Jesoa Kristy no manakaiky kokoa ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika.
Andao hiverina amin'ny 1. Mosesy, satria io boky io dia miresaka bebe kokoa momba ny antony ikarakaran’Andriamanitra ny olona. Rehefa avy nilaza izy hoe: “Andeha isika”, dia nanao hoe: “Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik’Andriamanitra no namoronany azy; ary nahary azy ho lahy sy vavy » (1. Mosesy 1,27).
Mariho eto fa ny vehivavy sy ny lehilahy dia noforonina mitovy amin'ny endrik'Andriamanitra; mitovy ny tanjany ara-panahy. Toy izany koa, ny anjara eo amin'ny fiaraha-monina dia tsy manova ny lanjan'ny olona iray - ny olona manana faharanitan-tsaina dia tsy sarobidy noho ny olona ambany saina, ary tsy manandanja kokoa noho ny mpanompo ny mpitondra. Noforonina araka ny endriny sy ny toetrany avokoa isika rehetra ary mendrika ny fitiavana, haja ary manaja ny olona rehetra.
1. Nilaza tamintsika i Mosesy avy eo fa nitso-drano ny olona Andriamanitra ka nilaza tamin’izy ireo hoe: “Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy, ary manjakà amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny vorona eny ambanin’ny lanitra sy ny biby fiompy ary ny biby rehetra izay mandady. eto an-tany” (and. 28). Fitahiana ny didin’Andriamanitra, izany no andrasantsika avy amin’Andriamanitra tsara fanahy. Tamin’ny fitiavana no nomeny ny olona ny andraikitra hitondra ny tany sy ny zavamananaina eo aminy. Mpitantana azy ny olona, ​​nikarakara ny fananan’Andriamanitra.
Indraindray dia manome tsiny ny Kristianisma ankehitriny ny fanoherana ny tontolo iainana. Io baiko io ve no "mahafehy" ny tany sy ny "fanapahan-kevitry" ny biby dia manome alalana ny olona hamotika ny tontolo iainana? Ny olona dia tokony hampiasa ny herin'Andriamanitra nomeny mba hanompoana fa tsy hanimba. Tokony hampanjaka fanjakana amin'ny fomba izay ataon'Andriamanitra izy ireo.
Ny hoe ny sasany manararaotra io fahefana sy soratra masina io dia tsy manova ny zava-misy fa tian'Andriamanitra hampiasa tsara ny famoronana isika. Raha mitsipaka na inona na inona isika ao anaty tatitra, dia hianatra isika fa nandidy an'i Adama Andriamanitra hamboly sy hitandrina ny zaridaina. Afaka nihinana ny zavamaniry izy, fa tsy tokony hampiasa sy handrava ilay zaridaina.
Fiainana eo amin'ny zaridaina
1. Ny Mosesy 1 dia mamarana amin’ny filazana fa “tena tsara” ny zava-drehetra. Ny olombelona no satroboninahitra, vato ifaharan'ny famoronana. Izany indrindra no tian'Andriamanitra hahatongavana - fa izay rehetra miaina amin'ny tontolo tena izy dia mahatsapa fa misy zavatra tsy mety amin'ny olombelona ankehitriny. Inona no tsy nety 1. Ny Mosesy 2–3 dia manazava ny fomba nandravana ny famoronana tonga lafatra tany am-boalohany. Ny Kristianina sasany dia mandray an'io fitantarana io ho ara-bakiteny. Na izany na tsy izany, mitovy ny hafatra teolojika.
1. Milaza amintsika i Mosesy fa nantsoina hoe Adama ny olombelona voalohany (1. Mosesy 5,2), ilay teny hebreo mahazatra nadika hoe “lehilahy”. Mitovy amin’ilay teny hebreo nadika hoe “velona” ny anarana hoe Eva: “Ary Adama nanao ny vadiny hoe Eva; fa izy no renin’izay rehetra monina ao.” Amin’ny fiteny maoderina, ny anarana hoe Adama sy Eva dia midika hoe “olona” sy “renin’ny rehetra”. Inona no ao anatiny 1. Ny fanaovana an'i Mosesy 3 - ny fahotana - izany no nataon'ny olombelona rehetra. Asehon’ny tantara hoe nahoana ny olombelona no ao anatin’ny toe-javatra tsy lavorary. Ny maha-olombelona dia manana endrika an'i Adama sy Eva - ny olombelona dia miaina ao anatin'ny fikomiana amin'ny Mpamorona azy, ary izany no mahatonga ny ota sy ny fahafatesana mampiavaka ny fiaraha-monina rehetra.
Jereo ny fomba 1. Ny Mosesy 2 dia maneho ny sehatra: Zaridaina tsara indrindra, any amin’ny toerana tsy misy azy intsony, voatondraka amin’ny renirano. Ny endrik'Andriamanitra dia miova avy amin'ny komandin'ny cosmic ho olona saika ara-batana izay mandeha ao amin'ny saha, mamboly hazo, mamorona olona avy amin'ny tany, mitsoka ny fofonainy amin'ny orony mba hanomezana aina azy. Nomena bebe kokoa noho ny an’ny biby i Adama, ka tonga zavamananaina, nephesh. Jehovah, ilay Andriamanitra manokana, dia “naka ny olona ka nametraka azy tao amin’ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy” (and. 15). Nomeny toromarika momba ilay saha i Adama, ary nasainy nomena anarana ny biby rehetra, ary avy eo dia namorona vehivavy iray ho namany ho an’i Adama izy. Ary indray, Andriamanitra dia nandray anjara manokana sy navitrika ara-batana tamin'ny famoronana ny vehivavy.
I Eva dia "mpanampy" an'i Adama, saingy io teny io dia tsy manondro ny maha-ambany azy. Ny teny hebreo dia ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra ho an'ny tenany Andriamanitra, izay mpanampy ny olona mila antsika. Tsy noforonina hanao ny asa tsy tian'i Adama i Eva - noforonina i Eva mba hanao zavatra tsy vitan'i Adama irery. Rehefa nahita azy i Adama dia takany fa mitovy amin'ny azy izy, vady nomen'Andriamanitra (and 23).
Ny mpanoratra dia namarana ny Toko 2 tamin'ny fanamarihana fitoviana: "Izany no antony handaozan'ny lehilahy ny rainy sy ny reniny ka ho akaiky ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy ireo. Ary nitanjaka izy roa lahy, dia ralehilahy sy ny vadiny, nefa tsy nahalala henatra »(and 24-25). Ka izany dia tokony ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny fomba talohan'ny nahatongavan'ny ota teo amin'ny lampihazo. Ny firaisana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra fa tsy zavatra mahamenatra.
Nisy zavatra tsy nety
Miditra amin’ny sehatra anefa izao ilay bibilava. Nalaim-panahy hanao zavatra noraran’Andriamanitra i Eva. Nasaina nanaraka ny fihetseham-pony izy, mba hampifaly ny tenany fa tsy hatoky ny fitarihan’Andriamanitra. « Ary hitan-dravehivavy fa tsara hohanina ny hazo sady mahafinaritra ny maso sy maka fanahy, satria mampahahendry ny olona izany. Ary naka voankazo izy ka nihinana, ary nomeny ny vadiny izay niaraka taminy, dia nihinana izy. »1. Mosesy 3,6).
Inona no tao an-tsain’i Adama? 1. Tsy nanome fanazavana momba izany i Mosesy. Ny tanjon'ny tantara ao amin'ny 1. Mosesy dia manao izay nataon’i Adama sy Eva ny olona rehetra - tsy miraharaha ny Tenin’Andriamanitra isika ary manao izay tiantsika, manao fialan-tsiny. Afaka manome tsiny ny devoly isika raha tiantsika, nefa mbola ao anatintsika ny ota. Te ho hendry izahay, fa adala. Te hitovy amin’Andriamanitra isika, nefa tsy vonona ny ho tonga araka izay lazainy amintsika.
Inona no ijoroan'ny hazo? Ny soratra dia milaza amintsika fa tsy ny "fahalalana ny tsara sy ny ratsy". Miorina amin'ny traikefa ve izany? Mahazo fahendrena ve izany? Na inona na inona asehony dia ny hevi-dehibe dia toa hoe voarara sy nohanina na inona izany na inona. Nanota ny olona ka nikomy tamin'ny Mpamorona azy ary nanapa-kevitra ny handeha. Tsy sahaza ho an'ny zaridaina intsony izy ireo, tsy sahaza ho an'ny "hazon'aina" intsony.
Ny valin'ny fahotan'izy ireo voalohany dia ny fiheverana ny tenany - nahatsapa izy ireo fa nisy zavatra tsy nety tamin'ny fitanjahany (and 7). Rehefa avy nanao ravina avy amin'ny ravina aviavy izy ireo dia natahotra ny hahita azy Andriamanitra (and 10). Ary nanao fialantsiny kamo izy ireo.
Nohazavain’Andriamanitra ny vokatr’izany: Hiteraka i Eva, izay anisan’ny fikasana tany am-boalohany, nefa izao nijaly mafy izao. I Adama dia hamboly ilay saha, izay anisan’ny drafitra tany am-boalohany, nefa amin’izao fahasahiranana lehibe izao. Ary ho faty izy ireo. Efa maty tokoa izy ireo.“Fa amin’ny andro ihinananao azy dia tsy maintsy ho fatin’ny fahafatesana ianao” (1. Mosesy 2,17). Tapitra ny fiainan’izy ireo tafaray amin’Andriamanitra. Ny hany sisa tavela dia ny fisiana ara-batana fotsiny, izay ambany lavitra noho ny tena fiainana nokasain’Andriamanitra. Saingy nisy ny mety ho azy ireo satria mbola nanana ny drafitra ho azy ireo Andriamanitra.
Hisy ady eo amin’ilay vehivavy sy ilay lehilahy. "Ary ny vadinao no irianao, fa izy no ho tomponao" (1. Mosesy 3,16). Ny olona mandray an-tanana ny raharahany (tahaka ny nataon’i Adama sy Eva) fa tsy nanaraka ny toromariky ny Tompo, dia azo inoana fa hifanditra, ary mazàna no manjaka ny herisetra. Toy izany ny fiaraha-monina rehefa miditra indray mandeha ny ota.
Ka vonona ny sehatra: ny olana atrehin'ny olona dia azy fa tsy avy amin'Andriamanitra, fahadisoana. Nomeny fiantombohana tonga lafatra izy ireo, saingy nampidinin'izy ireo, ary nanomboka teo ny olona samy voan'ny ota. Saingy na eo aza ny maha-mpanota ny olombelona, ​​ny olombelona dia mbola tahaka ny endrik'Andriamanitra - voaongotra sy maintso, mety hiteny ihany isika, fa mbola mitovy sary mitovy ihany.
Mbola mamariparitra ny maha-olombelona ny maha-olombelona azy io tanjaky ny lanitra io, ary izany dia mitondra antsika ho amin’ny teny ao amin’ny Salamo faha-8. Mbola manahy ny amin’ny olombelona ny komandin’ny cosmic satria nataony mitovy aminy kely izy ireo ary nomeny fahefana ny zavaboariny — fahefana mbola ananany. Mbola misy ny voninahitra, mbola misy ny voninahitra, na dia ambany kokoa noho ny drafitr’Andriamanitra ho antsika aza isika. Raha tsara ny fahitantsika izany sary izany, dia tokony hitarika ho amin’ny fiderana izany: “Tompo ô, mpanapaka anay, endrey ny voninahitry ny anaranao amin’ny tany rehetra.” ( Salamo 8,1. 9). Isaorana anie Andriamanitra manana drafitra ho antsika.
Kristy, ilay sary tonga lafatra
Jesosy Kristy, Andriamanitra tao amin’ny nofo, no endrik’Andriamanitra tonga lafatra (Kolosiana 1,15). Olombelona tanteraka izy, ary mampiseho amintsika ny tokony ho toetran’ny olombelona: mankatò tanteraka, matoky tanteraka. I Adama dia tandindon’i Jesoa Kristy (Romana 5,14), ary Jesosy dia antsoina hoe “ilay Adama farany” (1. Korintiana 15,45).
“Izy no nisy fiainana, ary fiainana no fahazavan’ny olona” (Jaona 1,4). Jesosy dia namerina ny fiainana very noho ny ota. Izy no fananganana ny maty sy fiainana (Jao 11,25).
Izay nataon’i Adama ho an’ny olombelona ara-nofo dia nataon’i Jesosy Kristy ho amin’ny fanavaozana ara-panahy. Izy no fiandohan'ny olombelona vaovao, ny fahariana vaovao (2. Korintiana 5,17). Ao aminy no hamelomana ny zavatra rehetra (1. Korintiana 15,22). Nateraka indray isika. Manomboka indray isika, amin'ity indray mitoraka ity amin'ny tongotra havanana. Amin’ny alalan’i Jesosy Kristy no namoronan’Andriamanitra ny olombelona vaovao. Ny ota sy ny fahafatesana dia tsy manan-kery amin’io zavaboary vaovao io (Romana 8,2; 1. Korintiana 15,24-26). Resy ny fandresena; nolavina ny fakam-panahy.
Jesosy no itokisana sy modely tokony harahintsika (Romana 8,29-35); niova ho tahaka ny endriny isika (2. Korintiana 3,18), ny endrik’Andriamanitra. Amin’ny alalan’ny finoana an’i Kristy, amin’ny alalan’ny asany eo amin’ny fiainantsika, dia esorina ny tsy fahatanterahantsika ary entina hanakaiky kokoa ny sitrapon’Andriamanitra isika (Efesiana). 4,13. 24). Miainga avy amin'ny voninahitra iray mankany amin'ny iray hafa isika - mankany amin'ny voninahitra lehibe kokoa!
Mazava ho azy fa mbola tsy hitantsika ilay sary amin’ny voninahiny rehetra, nefa matoky isika fa ho hitantsika izany. “Ary tahaka ny nitondrantsika ny endrik’ilay etỳ an-tany [Adama] no hitondrantsika ny endrik’ilay any an-danitra koa” [Kristy] (1. Korintiana 15,49). Ny vatantsika nitsangana tamin’ny maty dia ho tahaka ny tenan’i Jesoa Kristy: be voninahitra, mahery, ara-panahy, any an-danitra, tsy mety lo, tsy mety maty (and. 42–44).
Hoy i Jaona: “Ry malala, efa zanak’Andriamanitra sahady isika; nefa tsy mbola nambara izay ho toetsika. Fa fantatsika fa rehefa haseho, dia ho tahaka azy koa isika; fa ho hitantsika Izy araka ny maha izy azy. Ary izay rehetra manana fanantenana toy izany aminy dia manadio ny tenany mba hadio tahaka Azy.”1. Johannes 3,2-3). Tsy mbola hitantsika izany fa fantatsika fa hitranga izany satria zanak’Andriamanitra isika ary Izy no hanatanteraka izany. Hahita an’i Kristy amin’ny voninahiny isika, ary midika izany fa hanana voninahitra toy izany koa isika, ka ho afaka hahita voninahitra ara-panahy.
Avy eo i Johannes dia nanampy ity fanamarihana manokana ity: "Ary izay rehetra manantena azy toy izany, dia manadio ny tenany, tahaka ny fahadiovany." Koa satria hitovy ny asantsika, dia ezahintsika ho toa azy ankehitriny.
Koa ny olombelona dia eo amin'ny ambaratonga maro: ara-batana sy ara-panahy. Na ny olombelona voajanahary aza dia natao tahaka ny endrik'Andriamanitra. Na manao ahoana na manao ahoana fahotana lehibe ataon'ny olona iray dia mbola eo ny sary ary misy olona sarobidy tokoa ilay olona. Manana tanjona sy drafitra iray Andriamanitra izay ahitana ny mpanota rehetra.
Amin’ny finoana an’i Kristy, ny mpanota iray dia modely amin’ny zavaboary vaovao iray, dia ny Adama faharoa, dia i Jesosy Kristy. Amin’izao vanim-potoana izao isika dia ara-batana tahaka an’i Jesosy nandritra ny fanompoany teto an-tany, saingy ovana ho endrik’Andriamanitra ara-panahy. Izany fiovana ara-panahy izany dia midika fiovana amin’ny toe-tsaina sy fitondran-tena izay ateraky ny fiainana ao anatintsika Kristy ary ivelomantsika amin’ny finoana Azy (Galatiana). 2,20).
Raha ao amin'i Kristy isika dia hitondra ny endrik'Andriamanitra amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy takatry ny saintsika ny hahatanterahan'izany, ary tsy fantatsika hoe inona marina ny "vatana ara-panahy", kanefa fantatsika fa hahafinaritra izany. Andriamanitra be fitiavana sy be fitiavana dia hitahy antsika amin'ny be izay azontsika atao ary hidera azy mandrakizay!
Inona no hitanao rehefa mijery olona hafa ianao? Hitanao ve ny endrik'Andriamanitra, ny mety ho lehibe, ny sarin'i Kristy izay noforonina? Hitanao ve ny hakanton'ny drafitr'Andriamanitra niasa nanolotra fahasoavana ho an'ny mpanota? Faly ve ianao fa manavotra olombelona iray izay nivily lalana tamin'ny lalana marina? Moa ve ianao mankafy ny voninahitry ny drafitra lehiben'Andriamanitra? Manana maso hahita ve ianao? Tsara lavitra noho ireo kintana izany. Lehibe lavitra noho ny famoronana mihaja izany. Nomeny ny teniny dia marina izany ary tena tsara tokoa.